01 Ku soo dhowow Nederland - Ku soo dhowow Nederland
A Holland baad timid‎ > ‎
Adigoo Soomaaliya ayaad Nederland timid. Waxyaalo badan ayaad intaad noolayd soo martay, imaanshaha iyo ku noolaanshaha waddan cusubna maaha arrin fudud. Wax kastaa waa si kale, oo aad buu waddankaagii uga duwan yahay. Waxaa laga yaabaa inaadan weli ogeyn inaad Nederland joogi kartid iyo in kale, taasoo welwel kugu haysa. Buuggan ayaanu kuugu sheegaynaa waxyaalo badan oo ku saabsan waddankan aad timid. Cutub kasta waxaad ka helaysaa dhowr website oo la xidhiidha, si
aad si qoto dheer ugu sii akhridid arrimaha aad idinku xiisaysaan. Laga yaabaa inaad doonaysid inaad dad reer Nederland ah xidhiidh la samaysato, hadday saa tahayna u soo qor e-mailkan soo socota.
Dad badan ayaa Nederland la xidhiidhiya ubaxyada, gaar ahaan nooca 'tulpen' loo yaqaano. Nederland ubaxyo badan ayaa lagu beeraa. Sannadka bilowgiisa waxaad arkaysaa beero waaweyn oo ubaxyo ah. Aalsmeer ayaa ah meesha ugu weyn ee ubaxyada lagu xaraasho. Nederland waxay kaloo caan ku tahay 'molens' ama marawaxadaha waaweyn ee biyaha soo tuurta. Dad badan ayaa xataa u maleeya inay dad badan oo reer Nederland ahi kabaha looxa ka samaysan 'klompen' iyo dharka"klederdracht" ee reer Nederland dhaqanka u ahaa gashadaan. Laakiin tani waddanka aad bay ugu sii yaraanaysaa. Nederland waxay kaloo caan ku tahay farmaajo aad u macaan, tusaale ahaan nooca loo yaqaano 'Goudse kaas'.
Qarniyo badan ayay Nederlad biyaha la dagaalamaysay. Sidaa daraadeed waxaa jira biyo xidheeno badan ama moosas badan. Dad badan oo adduunka ku nool ayaa garanaya sheekada inkastoo aanay dhacdo run ah ahayn, ku saabsanayd wiilkii yaraa ee magaciisa Hansje Brinkers la odhan jirey. Suulkiisa ayuu mooskii ku xidhay si uu fatahaada biyaha u baajiyo.
Dad badan ayaa u maleeya inay Nederland tahay meel aad waxaad rabtid samayn kartid. Noocyada daroogooyinka khafiifka ah iyo dhilanimada waa la ogol yahay. Dadka reer Nederland waxay leeyihiin dabeecad furfuran. Nederland waa waddan qani ah, taasoo sababtay inay qaxooti badani halkan yimaadaan, kuwaasoo ay Soomaaliyi kamid tahay. Waxyaalaha ay dad badan oo qalaadi Nederland ka aaminsan yihiin badanaa run maaha. Qof kastoo Soomaali ahi boqol halaad oo geel ah ma leh, sidaasoo kale qof kastoo reer Nederland ahi kabo alwaaxa ma xidho.
Haddaba xaaladda runta ah ee Nederland ka jirtaa waa sidee? Su'aashan ayaan doonaynaa inaan buuggan yar kaga jawaabno.